Abazali bavale isikole - Ilanga News
Home Izindaba Abazali bavale isikole
Abazali bavale isikole
Bakhala ngokuminyana kwezingane emakilasini ekubeni kuneCoronavirus
ABAFUNDI baseSicelimfundo Combined School, eNquthu, abangaphezulu kuka-20 emakilasini.ISITHOMBE: SITHUNYELWE
BAVUKE indlobane abazali babafundi baseSicelimfundo Combined School, eNhlabamkhosi, eNquthu, kwavalwa isikole ngoba bekhala ngokuthi izingane zabo kaziphephile ngenxa yokuminyana emakilasini.
Kuzokhumbuleka ukuthi kwenzeka lokhu nje, izikole kazivuliwe ngokugcwele, kuvule uGrade 7 noGrade 12 njengoba izwe lavalwa mhla ka-26 kuNdasa (March) ngenxa yokubheduka kwe-coronavirus.
ISicelimfundo ivalwe ngoLwesine emuva kwesinqumo esithathwe yisigungu esilawula isikole.
Okwenze kwafinyelelwa kulesi sinqumo wukuthi abafundi bangaphezulu kuka-30 emakilasini ngenxa yokushoda kwamag-mbi okufundela.
Ilungu lesigungu esilawula isikole, uMnu Charles Buthelezi, lithi impilo yabafundi ibaluleke kakhulu, yingakho kuthathwe lesi sinqumo ngokubambisana nabaphathi besikole.
“Uma abantwana sebegula kuzokuba yinkinga yabazali leyo. Sifinyelele ekutheni izingane maziyohlala emakhaya, kuyothi ngesonto elizayo kubhekwe inqubekela phambili, kodwa okwamanje sineziphakamiso zokuthi abafundi bangene ngokwehlukana ngolunye usuku kungene umkhakha wakwasayensi ushintshane nowakwa-commerce ukuze baqhelelane,” kusho uMnu Buthelezi.
Uthi kabaphazamisani nemfundo kodwa impilo yiyona ebalulekile.
Utshele ILANGA ukuthi isikole sinomatikuletsheni owu-341 noGrade 7 owu-73, abafundi baningi badlula amagumbi esikole.
“Abafundi bahlaliswe ndawonye ngesikhathi kuvulwa, kodwa sabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi akulungile, kungcono kumiswe ukufunda nokufundisa,” kusho uMnu Buthelezi.
Uveze nokuthi okunye okuyinselelo enkulu wukuthi othisha kabekho esikoleni, bancane uma kuqhathaniswa nesibalo sabafundi esikhona okwamanje.
Uthi akuphusile ukuthi kungathathwa uthisha ofundisa uGrade-2 ayofundisa umatikuletsheni ngalesi sikhathi esincane esisele ngaphambi kokuba kubhale umatikuletsheni. Isigungu esilawula isikole sithi sifuna umnyango unikeze isikole amagumbi awu-7 angomahambanendlwana nothisha abawu-20 ngaphezu kwabawu-34 abakhona esikoleni.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi luzosukunyelwa lolu daba ngoba akumele abafundi baso basilele.
“Siwuhulumeni onakekelayo, impilo yabafundi ibalulekile, sizokwenza ngoku-semandleni ukuthi isikole sinikezwa omahambanendlwana maduze,” kusho uMnu Mthethwa
Previous articleUMengameli uphinde waxegisa eye-Corona